ကုန်ကြမ်း (GW501516) ကာဒီဒီယမ်အမှုန့် (317318-70-0) ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ
/ ထုတ်ကုန်များ / SARMS / Cardarine (GW501516) အမှုန့်
SKU: 317318-70-0. အမျိုးအစား: SARMS
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Cardarine ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (GW501516) အမှုန့် (317318-70-0) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Cardarine (GW501516) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Cardarine (GW501516) အမှုန့် အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
အမည်: Cardarine (GW501516) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 134-136 ℃
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Cardarine (GW501516) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Cardarine (GW501516) အမှုန့်ကိုလည်း GW501,516, GW1516, GSK-516 အဖြစ်နှင့် Endurobol အဖြစ်အနက်ရောင်စျေးကွက်အပေါ်လူသိများသည်။
တစ်နေ့လျှင် 10-20mg လုံလောက်သောထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသစ်သောဓာတုမှအိမ်ရှင်ရဲ့ sensitivity ၏အားသာချက်ယူတစ်နေ့လျှင် 10mg မှာစတင်ရန်အကြံပြုသည်။
GW501516 2year လေ့လာမှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသက်ရောက်မှုမရှိလျှောက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ရပ်တန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အများစုမှာတစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦး 12-14week ချိုးနှင့်အတူတစ်ကြိမ် 4-6 ပတ်သံသရာကို run ။ ဒါက SARM သံသရာနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မှပုံမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ GW501516 / Cardarine အချိန်ထိုကဲ့သို့သောအတိုငွေပမာဏကိုအပြီးပယ်-စက်လီးစီးခြင်းခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမျှသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာ GW501516 / Cardarine များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘယ်သူအားမျှဖြစ်ကြပေမယ့်နောက်ဆုံး 20years မဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးယစ်ဆေးလေ့လာနေမည်သူမဆိုမြင်ပြီဟုပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
GW501516 ကုန်ကြမ်း Powder (CAS 317318-70-0)
Cardarine အမှုန့် (CAS 317318-70-0) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို; GW501516 အမှုန့်ကိုဝယ် AASraw ထံမှ
အမည်: GW501516 / Cardarine
အရည်ပျော်မှတ်: 134-136 ℃
AASraw ပါးစပ်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးအသုံးပြုမှုများအတွက်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများသို့မဟုတ်ကာယဗလမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% GW501516 / Cardarine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Cardarine (GW501516) အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
GW 501516 / Cardarine အခြေခံသတင်းအချက်အလက်
Cardarine ၏စူပါ Cardarine ကဘာလဲ? / 8 အကျိုးကျေးဇူးများ
သငျသညျ Cardarine အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းဖို့လိုအပ်9သောအရာတို့ကို !!!